Nano Web Portal | Department of Research and Innovation : Ministry of Education (Science and Technology)
Home Nano Web Portal
နာနိုနည်းပညာသုတေသနဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ “နာနိုနည်းပညာဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသား လူမှုစီးပွားမြင့်မားတိုးတက်စေရန် အဓိကလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်” ဖြစ်ပါသည်။
(က) ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားရေးဘဝမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်သော နာနို နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ခ) နိုင်ငံတကာအဆင့်မီနာနိုနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်၊
(ဂ) နာနိုနည်းပညာသုတေသနရလာဒ်များဖြင့် ပြည်တွင်းစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်အတွက် နည်းပညာလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသော အကျိုးသက် ရောက်မှုများကို လေ့လာစီမံမှုများဆောင်ရွက်ရန်နှင့်
(င) အရည်အသွေးပြည့်မီသော အင်ဂျင်နီယာများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် သုတေသီများ စသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ စဥ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံ၏အမျိုးသားလူမှုစီးပွားမြင့်မားတိုးတက်စေရန်နှင့် လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်း နိုင်ရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ ပြန်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ စသည်တို့အတွက် နာနိုဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၊ နာနိုဒြပ်ပစ္စည်း များ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အလွှာပါးကပ်တင်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။နာနိုဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် အလွှာပါးကပ်တင်ခြင်းသုတေသနဌာန အနေဖြင့် လောင်ကျွမ်းမှု အားပေးသော ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းစေသော ဓာတ်ငွေ့များ (CO2/NOx) လျှော့ချပေးသော‌‌ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၊ ဆီစစ်သုံးနာနို ပစ္စည်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဇီဝ လောင်စာဆီထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ စားသောက်ကုန်ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ် ဝိုင်ယာနှင့်ကေဘယ်ကြိုးများ ပြုလုပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းသော နာနိုပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ချည်မျှင် နှင့်အထည်များတွင် အစွန်းအထင်းမဖြစ်စေသော နာနိုဒြပ်ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ မော်တော်ကားကိုယ်ထည်များ တည်ဆောက်ရန်အတွက် ကွန်ပို့စစ်ပစ္စည်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ပွန်းစားခံသုတ်ဆေး များနှင့်ပွန်းစားခံ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်စေရန် အလွှာပါးကပ်တင်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဓာတုဗေဒဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသင်တန်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် သင်တန်းသား (၂၄) ဦးတို့အား လက်‌တွေ့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသင်တန်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် သင်တန်းသား (၂၄) ဦးမှ သုတေသနလုပ်ငန်းများအားရှင်းလင်းပြသသည့်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအတွက် နာနိုကွန်ပိုစစ်ဒြပ်ပစ္စည်းများ၏ အသုံးချခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း
(၁) နာနိုကွန်ပိုစစ် (Silver ၊ TiO2၊ Fe3O4၊ Silica etc.) များ ကိုအသုံးချခြင်းနှင့် လေ့လာ စမ်းစစ်ခြင်း သု‌တေသန လုပ်ငန်း
(၂) Silica – Silver Nano-composite စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
(၃) TiO2 – Silver Nano-composite စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
(၄) Fe3O4 နာနိုအမှုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း
၁။ Copper II Oxide နာနိုအမှုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ၄င်းအမှုန်များဖြင့် Chemical Gas Sensor ပြုလုပ်ခြင်း
၂။ Biofuel ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးဝင်သော Mesoporus Silica Nanoparticals များထုတ်လုပ်ခြင်း
၃။ ချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံများမှထွက်သော ရေဆိုးရေညစ်များကို TiO2-Zeolite Nanocomposite အသုံးပြု၍ သန့်စင်ခြင်း
၄။ TiO2 နာနိုအမှုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ၄င်းအမှုန်များဖြင့် Gas Sensor ပြုလုပ်ခြင်း
၅။ ဇင့်အောက်ဆိုဒ် နာနိုအမှုန်များကို သနပ်ခါးတွင် ထည့်သွင်းပြီး နေရောင်ခြည် ကာကွယ်ပေးနိုင်မှု လေ့လာခြင်း
၆။ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို သန့်စင်ပေးနိုင်သော Silver Nanopartical များ ပြုလုပ်၍ စျေးကွက်ဝင် Water filter များ၏ ရေသန့်စင်နိုင်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ခြင်း
(က) Talented Young Scientist Program
ဓာတုနည်းပညာသုတေသနဗဟိုဌာနမှ သုတေသနပညာရှင် (၃)ဦးသည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ Talented Young Scientist Program အရ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် သုတေသနလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
အမည် တက္ကသိုလ် သုတေသနနယ်ပယ်
၁။ Yadanar Win Myint,Tun Tun Moe,Wint Yi Linn, Anjae Chang,Phyu Phyu Win“The Effect of Heat Treatment on Phase Transformation and Morphology of Nano-crystalline Titanium Dioxide (TiO2)” International Journal of Scientific & Technology Research, VOLUME 6, ISSUE 06, 293-299,2017.
၂။ Lwin Thuzar Shwe, Phyu Phyu Win “Synthesis and characterization of leaf-like CuO nanostructures by alkaline precipitation method” Transferring Nanotechnology Concepts towards Business Perspectives, ISBN 978-935-124-701-2 India (2016).
၁။ Wint Yi Linn, Tun Tun Moe, Khine Shwe Zin, Yadanar Win Myint, Phyu Phyu Win, Study on Synthesis of Copper (II) oxide Nanoparticles by Precipitation and Laser Ablation Methods“. Journal of Myanma Academy of Technology, Vol. 16, July, 2016.
(၁၀.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၁၂.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့ အထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန ဆက်သွယ်ရန်
၁ ဒေါက်တာဖြူဖြူ၀င်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဌာနမှူး၊ သုတေသနနှင့်တီထွင် ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန +၉၅၁-၆၆၅၀၅၅